Xiisadda Farmaajo iyo Rooble oo xal loo waayay | KEYDMEDIA ONLINE
Xiisadda Farmaajo iyo Rooble oo xal loo waayay
Ujeedka ugu weyn ee Fahad iyo Farmaajo doonayaan in ay hirgaliyaan ayaa ah, in Muqdisho marti-galiso isku dhacyo ciidan iyo fowdo amni, si loo daboolo kiiska Ikraan Tahliin Faarax, oo ay ku eedeusan yihiin hoggaankii hore ee NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Maamulka Koofur-galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagaren) ayaa dhawaan dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Maamulkaas, kadib markii lagu guuldareystay waan-waan saddexdii habeen ee la soo dhaafay lagu dhex-dhexaadinayay Farmaajo iyo RW Rooble.
Sida ay sheegayaan ilo ku dhow xaafiiska Lafta-gareen, MW Cabdicasiis, ayaa rajo xumo weyn ka muujiyay wadahadalladii xal raadinta, wuxuuna quus kadib, go’aansaday inuu dib ugu laabto deganka uu madaxda ka yahay.
Dadaallada dhex-dhexaadinta oo ay garwadeyn ka ahaayeen Lafta-gareen iyo Qoorqoor, ayaa burburay habenkii Axadda, kadib markii Madaxweynihii hore Farmaajo, uu diiday in kiiska Caddaalad raadinta Ikraan loo daayo hay’adaha garsoonka, isla-markaana uu si buuxda uga horyimid magacaabidii Ra’iisul Wasaaraha ee Bashiir Goobe.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen, xubo sare oo ka tirsan masuuliyiinta Madaxtooyada Galmudug, (Qoorqoor iyo Lafta-gareen) waxa ay Ra’iisul Wasaaraha ku raacsanyihiin in kiiska Ikraan loo daayo hay’adaha loo xilsaaray, waxayse soo jeediyeen in hoggaankaa NISA loo dhiibo shaqsi la isla oggolyahay oo labada dhinac heshiis ku yihiin, taas oo uu ka dhaga adeegay Farmaajo.
Kooxda Famaajo ayaa dadaal xooggan ku bixisay in ay fashilmaan wadahadallada, si aan Fahad Yaasiin loo horgeyn Maxakamadda, waxaana qorsheeynayaan in qaar ka mid ah Xildhibaannada waqtigu ka idlaaday dhamaadkii sanadkii hore ay qaab fowdo ah xilka uga qaadaan Ra’iisul Wasaare Rooble, taas oo sababi karta in ay magaalada dib ugu soo laabtaan Ciidamadii (Badbaado Qaran).